Sharciga maalgelinta ee Lambarka Bulshada 2021 ayaa labanlaabmaya muddada fasaxa dib-u-soocidda haddii ay dhacdo tababar dib-u-tababar xirfadeed. Fasaxa dib-u-dejinta waxa la qaataa inta lagu jiro xilliga ogaysiiska shaqaaluhuna wuxuu helayaa gunnadiisa caadiga ah. Haddii fasaxa dib-u-dejinta uu ka badan yahay muddada ogeysiiska, sharcigu wuxuu dhigayaa in gunnada uu bixiyo loo shaqeeyuhu muddadaas lagu jiro nidaamka bulsheed ee la midka ah gunnada hawlqabadka qayb ahaan. Cabbirkan u dambeeya waxa kale oo uu khuseeyaa fasaxa dhaqdhaqaaqa gudaha xadka 12 bilood ee ugu horreeya fasaxa ama 24 bilood sidoo kale haddii ay dhacdo dib u tababarid xirfadeed.
Fasaxa dib u qaabeynta iyo fasaxa socodka: dhiirigelinta ku noqoshada shaqada
Fasaxa dib u qorista
Shirkadaha leh ugu yaraan 1000 shaqaale ah, markii laga fikirayo hoos u dhac dhaqaale, loo shaqeeyuhu waa inuu u fidiyaa shaqaalaha ay khuseyso fasaxa dib udejinta.
Muddada ugu badan ee fasaxani waa, mabda 'ahaan, 12 bilood.
Nidaamka heshiiska wadajirka ah ee la xiriira joojinta heshiiska wadajirka ah ama la xiriira maamulka ...
Fasaxa shaqaalaynta: muddada dheer ee la kordhinayo haddii ay dhacdo dib-u-tababar xirfadeed July 10th, 2021Tranquillus
READ Istaraatiijiyada 3 ee iibinta khadka tooska ah
horeKirismaska, Sannadka Cusub: shaqo-bixiyahaagu ma kugu qasbi karaa inaad shaqeyso?
socdaSida loo abaabulo waxbarashadaada guriga
Cilada aan cudur daarka lahayn ee loo shaqeeyaha waxay la xiriirtaa ka warqabka khatarta